China LSM Vertical Wet Stirring Mill orinasa sy mpanamboatra | Qiangdi
Ny milina fampifangaroana LSM dia mitroka ireo toetra mampiavaka ny fikolokoloana, ny fividianana sanding, ny fitotoan'ny tilikambo sns. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo, ambany feo, fahaiza-manao fanodinana lehibe ary fampandehanana sy fikolokoloana mety.
1 .LSM fampifangaroana fikosoham-bary maka ny toetra mampiavaka ny fikolokoloana, ny fasika, ny tilikambo fikosoham-bary sns. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo, ambany feo, fahaiza-manao fanodinana lehibe ary fampandehanana sy fikolokoloana mety.
2.raha ny haben'ny fahana dia 325 harato, aorian'ny fikolokoloana indroa dia mety hahatratra mihoatra ny -2 Nm m95% (salan'isan'ny sombintsombiny 0,6 μm etsy ambany).
3. azonao atao ny manatsara ny fikolokoloana, nefa koa mahazo pulp state flow.
4. fikosoham-bary fikosehana varingarina amin'ny alàlan'ny akora azo aokafana ary ny fitaovana mafy, hazavana, hain-tsivana maharitra.
5. ny fampiasana haingo amin'ny haino aman-jery, ny haben'ny siansa amin'ny siansa, amin'ny fizotran'ny fikosoham-bary, tsy misy fandotoana vy, dia tsy misy fiantraikany amin'ny fahadiovan'ny vokatra.
6.mampiasà fikosoham-bary mando dia mety ho fandidiana mitohy, tsy miankina amin'ny fitotoan'ny vokatra, na azo averina famerenana tsingerina mba hamenoana vokatra roa na maromaro.
Ireto dingana manaraka ireto dia ho an'ny referansa ihany ary azo foronina arakaraka ny faran'ny mpanjifa sy ny takian'ny fahaiza-manao.
(1) Tabilao fandefasana Ball Ball iray napetraka
(2) Andiany roa ao amin'ny tsipika fizarana andian-dahatsoratra
(3) Tabilao roa amin'ny tsipika fizarana mifanitsy
Teo aloha: Ireo singa ho an'ny Jet Mil
Manaraka: Rafitra WP-WDG – Ampiharo amin'ny sehatry ny agrochemical